Xilliga la qabanayo Final-ka Tartanka degmooyinka Gobolka Banaadir oo la shaaciyay – Geelle Mag
Xilliga la qabanayo Final-ka Tartanka degmooyinka Gobolka Banaadir oo la shaaciyay
Guddoomiye ku xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Marwo Basma Caamir Jakeetti ayaa sheegtay in dhawaan la qabanayo kulan ciyaareedkii kama dambeysta ahaa ee degmooyinka Waaberi iyo Dharkeynnley ee gobolka Benaadir.
Kulankan oo ahaa kama dambeysta tartankii degmooyinka gobolka Banaadir ayaa horay u baaqday, kadib markii Wasiiradda Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ay korontada ka dansatay garoonka, xilli ay ku sugnaayeen kumanaan qof.
Guddoomiye ku xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Marwo Basma Caamir Jakeetti ayaa hadda sheegtay in Ciyaarta kama dambeysta ah ay dhaceyso 5-ta bishan Diseembar oo ah maalinta khamiista ah ee soo socota, waxayna ugu baaqday Shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Caasimada dalka in ay ka soo qeyb galaan si loo muujiyo horumarka Caasimadda.
Wasiirad Khadiija Maxamed Diiriye iyo Guddoomiye Cumar Finish ayaa isku qabtay Ciyaaraha gobolka Banaadir oo wasaaradda ay dooneyso in ay kaalin ku yeelato, halka Duqa Muqdishana uu ku dooday in wixii heer gobol ah aysan wasaaraddu shaqo ku lahayn.
Si kastaba ha ahaatee Wasiiradda Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa rumeysan in haddii banaanka laga dhigo Ciyaaraha gobolka ay taas macnaheedu tahay inaysan jiri doonin wax ay qabato wasaaradda, maadaama Muqdisho ay tahay magaalada kaliya ee ay ka howl-gasho Wasaaraddu. Waa taas sababta keentay in ay korontada ka dansato garoonka Injineer Yariisow, xilli ay dhici rabtay ciyaartii kama dambeysta ahayd ee degmooyinka gobolka Banaadir.
Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa la sheegay in ay ka xun tahay in wasaaradda aan kaalin laga siin qabashada tartankan. Guddoomiyeyaashii ka horeeyay Guddoomiye Cumar Finish ayaa wasaaradda kaalin ka siin jiray ciyaarahan, hase yeeshee Guddoomiye Cumar Finish ayaa taas meesha ka saaray, taasi oo ka carreysiisay Wasiiradda.
Warar lagu kalsoon yahay oo aan helnay ayaa xaqiijinaya in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ugu dambeyn xaliyay khilaafkii u dhaxeeyay Marwo Khadiija iyo Cumar Finish.
Sawiro:-Qaar ka mid ah Odayaasha Saxiixayaasha Galmudug oo gaaray Magaalada Dhuusamareeb